भारतमा नागरिकता कानूनको विरोध, भएको के हो ? « MNTVONLINE.COM
भारतमा नागरिकता कानूनको विरोध, भएको के हो ?
संशोधनसहितको नागरिकता कानुनको विरोधमा भारतको विभिन्न राज्यमा शनिबार समेत प्रदर्शन भएको छ । कानुनको विरोधमा विभिन्न संघ संगठनले शनिबार संयुक्त रुपमा केन्द्रीय रेल्वे स्टेशनमा वृहत्त प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले संशोधित कानुनको खारेजीको मागसहितको प्लेकार्ड र ब्यानर लिएर सडकमा उत्रिए ।